I-Luz-Eli xesha liBalulekileyo-ukubala usiya eBukumkanini
INkosi yethu ku	NguLuz de Maria de Bonilla ngoJulayi 22nd, 2021:
Bantu bam abathandekayo: Ndiyanisikelela ngala maxesha okudideka. Luz ivuliwe ukudideka… Bantu bam, musani ukubambana nabazalwana benu. Kambani ngokomoya; Yixabise ukungxama kokutshintsha ubomi bakho ukuze utshintshe iimvakalelo zakho eLuzi izivamvo… niyizise kum. Abantu bam kufuneka bashiye ukungqinelana apho uninzi lwabantwana bam bazifumana bekulo. Lo ngumzuzu obalulekileyo kwaye abo bangabam kufuneka boyise ukungakhathali. Ukunikezela indawo kum emini akwanele: kuya kufuneka ungene kuMsebenzi wam kunye neNtshukumo kwaye wenze njalo ngoMoya nangeNyaniso. (Yoh. 4:23) Xa abantwana baM bendibiza njalo, xa ukhala kuMoya oyiNgcwele, xa uzinikezela kum, xa ugcina ukholo kum, usendleleni endikubizela kuyo.
Ngeli xesha libaluleke kakhulu kwabo bangabam, utshintsho ebendilucela kufuneka lubekho ngokukhawuleza… Ngalo mzuzu ndiyalifuna. Ndiyayazi imisebenzi yakho, ukuba akubandi, akushushu; Akwaba ububanda okanye ushushu! Kodwa ngenxa yokuba udikidiki, ungabandi okanye ushushu, ndiza kukuhlanza uphume emlonyeni wam. (ISityhi. 3: 15-16) Bantu bam abathandekayo, into ebilindelwe isondele. Ndiva abantwana bam besithi: "Ndilinde ixesha elide kwaye akukho nto yenzekayo". Iziganeko azizukunikeza ixesha lokucinga ngento enokwenzeka. Icawa yam iya kuvavanywa ngakumbi: utshintsho olungalindelekanga eVatican luya kubeka abantu baM.
Indlala iya kubakho kuwo onke amazwe; iziqalelo zisukele phezulu emntwini, azikuniki xesha lide, awuyi kuzinqanda. Sukuchitha isipho sobomi: zigcineni niphaphile ngokomoya (1 Tes. 5: 6): Mabazilawule abo banesimilo esomeleleyo, kungenjalo baya koyiswa ngaMandla Am… Mabathi abo babeke ubomi babo kuthixo wemali batshintshe: bazakubona ukuwa kwezoqoqosho… Abo baphambukayo kwindlela endihamba nayo. ziphawulwe ukuba zibuye ngaphambi kokuba ubumnyama bujiye kwaye azinakukwazi ukubuya… Ukufa ngokomoya kukhwele ukusuka emantla kuye emazantsi kwaye ukusuka empuma ukuya entshona kukhangela ixhoba elinganqweneli kutshintsha. Gcina ukhumbule ukuba kuMsebenzi oMkhulu kaThixo, awunakubaluleka. Ndiyakuthanda kwaye ndiyithululela iNceba yam, nangona olu Thando lwaM kufuneka luhlawulwe ngabantu baM.
Mamela iMagisterium yeNyaniso yeCawa yam, thobela uMthetho oNgcwele, jonga kwaye uqaphele iMikhosi. Ndikubiza ngaphezu kwako konke ukuba ube luthando lwam ukuze ubungqongqo buthotywe luthando lwaM: Ngamana umhlaba owomileyo entliziyweni yabantwana baM ungaguqulwa ube lilizwe eliqukuqela ubisi nobusi… Zanga iingcinga neengqondo zingenakugqitha kuMthetho wam nakweyam. Iisakramente ziyathanjiswa zide zibe ludongwe ezandleni Zam… Bantu bam, ukubandezeleka koluntu kuya kuba ngqwabalala kubo bonke; isifo siyaqhubeka kwaye ulusu luza kuba yindawo yokuhlala esinye isifo.
Uyaqhubeka nohambo lwakho. Ngoku uza kubona amandla ezinto evukela ngokuchasene noluntu olunesono! Thandaza uthathe inyathelo ukuze abazalwana noodade bakho baqonde ukuba utshintsho lukhona ngokukhawuleza. Thandazela ukuba bonke bakhanyiselwe kwaye amehlo abo aqhubeke nokubona indlela abandikhubekisa ngayo ngemisebenzi kunye nezenzo zabo. Ndikubiza ukuba ubonakalise: ningamangqina ezilumkiso zam: apho bekushushu, ngoku ikhephu liyawa, kwaye apho bekukho ikhephu, kukho ubushushu obufuthanisayo.
Isilumkiso eLuzi kwisilumkiso… iyeza: sukuba phakathi kwabo baqhubeka bengaboni ngokomoya. Thwala iisakramente ngalo lonke ithuba. Mna, Yesu wakho, ndikuthanda ngothando olungunaphakade. Intsikelelo yam ingani nonke.
INkosi yethu ithetha nathi ngokucacileyo: Isinika umbono woluhlu lwezibetho kwaye isibizela emthandazweni oqhubekayo, owaziyo ukuba ngaphandle kweyona Ngcwele ingcwele kwaye ngaphandle kukaMama wethu asiyonto. Ke ngoko, yonke into esiyenzayo kufuneka ikhatshwe ngumnikelo kunye nombulelo. Umthandazo akufuneki uphindaphindwe okanye ngentloko, kodwa isenzo esenziwe kwiNkosi yethu uYesu Krestu kwimbuyekezo, ngentlawulelo, ekuthandeni wonke umntu. Masizilungiselele oko siphila ngako kunye noko kuseza kuphila ngenxa yokungathembeki koluntu kuMdali walo. Amen.
Luz ivuliwe ukudideka…
exhonyiweyo NguLuz de Maria de Bonilla, imiyalezo, Iintlungu zabasebenzi, Isilumkiso, ukuRhoxiswa kwakhona, kunye noMmangaliso.
← Marija - Yiba ngumthandazo
UGisella - AmaXesha a… →